Panty Liners 1D Auto Parts CO ။ , LTD ကိုအသုံးပြုသည်။ ကုန်သွင်းသူ | 1D;ONE
1d; Panty Liners 1D Auto Parts Co ။ , Ltd ကိုအသုံးပြုသည်။ ပေးသွင်း, Market က Oriental& ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု - တိုက်ရိုက်ဆိုင်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးရုံးဖွင့်ပါ,
ဆလင်ဒါအကှနျ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဆလင်ဒါအပေါက်ထဲတွင်နေရာရဲ့ cylindrical တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်, ထိုဆလင်ဒါဦးခေါင်းကနေ fixed ။ ပစ္စတင်သည်၎င်း၏အတွင်းပိုင်းအပေါက်တွင်အပြန်အလှန်ရွေ့လျားမှုကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ယင်းဆလင်ဒါကှနျ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်နေသောခေါင်းစဉ်:
1. Cylinder အလုပ်လုပ်အာကာသဆလင်ဒါခေါင်းနှင့်ပစ္စတင်နှင့်အတူဖွဲ့စည်းသည်။
Cylinder ပုံစံပစ္စတင်ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ 2. Cylinder ကှနျ့ပစ္စတင်ခြမ်းတွန်းကန်အားဖြင့်သမုတ်သောနှင့်ပစ္စတင်များလှုပ်ရှားမှု reciprocating ၏ဦးဆောင်ဖြစ်လာသည်။
oe NO .: 5-11261-016-2 ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: IZUMIN&tmp
မူလအစရာ: ကွမ်ကျိုး, China (Mainland) အရောင်: အဖြူ
ကားမော်ဒယ် - ဆလင်ဒါလက်မောင်း မော်ဒယ်နံပါတ်: 4be1
အမျိုးအစား: စံအရွယ်အစား အရွယ်အစား စံအရွယ်အစား
အာမခံချက် - 1 နှစ် ပစ္စည်း: ဓါတ်သတ္တု
MOQ: 1 Cylinder တင်ပို့သည့်နေ့စွဲ: 5-7 ရက်
တရုတ်မှာတစ်နှစ် 2012 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး; gusngzhou ;, ကျနော်တို့ 1D မော်တော်ကားပစ္စည်း, LTD ။ ။ Crankshaft ၏လက်ကားရောင်းအားပေးသွင်းသူအဖြစ်ပါ0င်သောတစ် ဦး တည်းသောစီးပွားဖြစ်ခိုင်မြဲမှု (တစ် ဦး ချင်းစီ) အခြေခံကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏သီးသန့်ဒီဇိုင်းများ, သာလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်ကြီးမားသောဖောက်သည်များအကြားကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိဆောင်ရွက်နေသည်။ ဤအပြင်ဤ အချိန်မှစ. အချိန်ဇယားများကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်နှင့်အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဖောက်သည်များ၏အမှာစာများကိုအချိန်မီတင်ပို့ခြင်းနှင့်အာမခံချက်ပေးရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အာမခံချက်ပေးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်များကိုစက်မှုလက်မှုရှိကုမ္ပဏီများစာရင်းတွင်ပါ0င်သည် ။